शैव दर्शनको महिमा: रास्ट्रीयता बलियो बनाउने आधार | नेपाल दर्शन
हिमालयको काखमा बसेको हिमवत् खण्ड नेपाल प्राचीन देश हो। शैव शाक्त भुमिमा हामी मनुष्य जीवात्माहरुले जानेर वा नजानेर भोग वासनाले भोगेर शिव अवज्ञा गरिरहेका छौँ ।
वैदिक सनातन धर्म भनेकै नेपाली हावा, पानी, माटो हो । नेपालका आदिवासी रैथानेहरुको जीवनपद्धति नै वैदिक सनातन धर्म हो । अहिले यो धर्म हिन्दूधर्म भनेर चर्चित भएको छ । वैदिक सनातन धर्म दर्शनभन्दा उपयोगी र वैज्ञानिक धर्म दर्शन छैन । अरु सबै धर्म दर्शन शाखा हुन् । मूल धर्म त वैदिक सनातन धर्म नै हो ।
भूतभावन, लोकपावन आशुतोष भगवान् सदाशिवजीका दिव्य महिमाहरुको वर्णन वैदिक र पौराणिक दुई प्रकारले भएका छन् । विश्वप्रसिद्ध देवादी देव आराध्यदेव श्रीपशुपतिनाथको मन्दिर रहेको, शिवालयहरुले भरिपूर्ण नेपाल पशुपत्य क्षेत्र हो । विश्वसम्पदा सूचीमा नेपालका थुप्रै प्राचीन धार्मिक स्थलहरु सूचीकृत भएका छन् ।
नेपाल देवस्थल हो । विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको राजधानी हो । आस्थाको एकमात्र केन्द्र हो । ब्रह्म ज्ञानका लागि मानवले जीवनमा निष्काम कर्म, भक्ति (उपासना) र ज्ञान अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सिंगो नेपाल नै एकमात्र धार्मिक क्षेत्र हो । दुष्ट, पापीबाहेक नेपालमा रहने सबै वैदिक सनातन धर्मप्रति आस्थावान छन् ।
धार्मिक आस्था, विश्वास बोक्नेहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनस“गस“गै इसाईकरणको महाअभियान पनि भित्रिएको छ । धार्मिक सहिष्णुता रहेको नेपालमा इसाईकरणको अभियानले धार्मिक संकट, धार्मिक द्वन्द्वको विषम परिस्थितिमा नेपाललाई जबरजस्ती धकेलिदिएको छ । धर्मनिरपेक्षता, सनातन हिन्दूधर्म, संस्कार, संस्कृति, पद्धति मास्ने बलियो साधन र अस्त्र बनेर उभिएको छ । हिन्दू धर्मावलम्बी र इसाई धर्मावलम्बीबीच कुनै पनि बेला महाभारत युद्ध भएझैँ ठूलो “वार कि पारको युद्ध” हुनेछ, जुन अब रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन ।
समय कसैको काबुमा छैन । विनाशकाले विपरीत बुद्धि हुनेहरुको सर्वनाश र सत्यानाश नभएसम्म कसैले नेपालमा शान्ति कायम गर्न चाहेर पनि शान्ति हु“दैन । किनभने, हिन्दूधर्मको विश्वको केन्द्रस्थल नेपालमा धर्मको आडमा आक्रमण गर्ने, हिन्दूधर्म समाप्त पार्ने षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्रले जरा गाडेको छ । धर्म यस्तो संवेदनशील विषय हो, आफ्नो धर्म संकटमा पर्न खोज्यो भने धर्मको रक्षाका लागि उसले आत्मबलिदान गर्न, मर्न र मार्न कत्ति पनि बेर लगाउ“दैन ।
धर्म रक्षति रक्षित अर्थात् धर्मको रक्षा हामीले ग¥यौँ भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्दछ । धर्ममा शक्ति र एकता हुन्छ । धर्ममा सत्यता हुन्छ र धार्मिक युद्ध त्यतिखेर हुन्छ जबजब पृथ्वीमा भय, भ्रम, अज्ञान, पाप, अपराधको मात्र बढ्दै जान्छ । सत्यमाथि असत्यको हाबी हुन थाल्दछ, त्यहा“ धार्मिक कलह हुन्छ । त्यतिखेर सत्य धर्मको प्रतापले सम्पूर्ण पापी, विश्व ब्रह्माण्डमा ज्यादती गर्न खोज्ने अतिवादी, आतंकवादीको समूल नष्ट हुन्छ ।
नेपालको जनआन्दोलन, जनयुद्ध आफैँमा अन्यायपूर्ण, दुस्साहसवाद र दुःशासन देखा परेको छ । राजनीतिमा धर्म सकिएकै कारण नेपालमा निकास नआएको हो । दुष्ट, पापी, अपराधी, असत्यवादी र अराष्ट्रिय त¤व र शक्ति समाप्त गर्ने बलियो अस्त्र नै धार्मिक युद्ध हो, जुन नेपालमा जारी छ ।
पापीहरु समाप्त हुन्छन्, धर्मात्माहरु स्थापित हुन्छन् भनिएकै छ– “परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम्”, यो देव वाक्य हो । नेपालको राष्ट्रियता भनेकै हिन्दूत्व हो । नेपालमा हिन्दूहरुको बाहुल्यता छ । धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्म परिवर्तनको अभियान र धर्म परिवर्तनका लागि दिइएको स्वीकृति र मान्यता होइन । धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउनेहरु होशियार ! सावधान !
नेपाललाई धार्मिक संकटबाट बचाउन सम्पूर्ण हिन्दूहरु जाग, उठ, आइलाग्नेमाथि जाइलाग । अहिले संकटमा पर्न लागेको धर्मलाई बचाउने, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उपयुक्त बेला हो । जुनसुकै विचार र राजनीतिक दलमा लागेका हिन्दूहरु परिआएको बेला एक हुन सक्दछन् । किनभने, हिन्दूत्व धर्ममात्र होइन राष्ट्रियता पनि हो ।
नेपाल हिन्दूधर्म राष्ट्र हो । धर्म एउटा सत्ता र शक्ति हो । धर्मबाट अलग रहेर राष्ट्र टिक्न सक्दैन । धर्म मानिसले धारण गर्दछ । जुनसुकै राष्ट्रको राष्ट्रियता भनेको नागरिक हो । नेपालको राष्ट्रियतास“गै हिन्दूधर्म गा“सिएको छ । धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेकै दिनबाट नेपालमा संकट उत्पन्न भएको छ । नेपाल र नेपालीको श्रीवृद्धिमा आ“च पुगेको छ ।
हिन्दूधर्म मासेर इसाईकरण गर्नु भनेकै नया“ नेपालको निर्माण हो । बेलायत, युरोपेली महासंघलगायत विश्वभरिका इसाई धर्मावलम्बीहरु एक भएर नेपालमा इसाई धर्म परिवर्तन अभियान सञ्चालन गरेका छन् । नेपालमा जारी इसाईकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले नेपालका दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई पनि टाउको दुखाइरहेको छ । विश्वयुद्धको सुरूवात नेपालबाटै हुन्छ भनेर कुनै बेला कुनै भविष्यवेत्ताले गरेको भविष्यवाणीको चर्चा अब सार्थक देखिन खोजेको छ । नेपालमा इसाईकरणका लागि क्रिश्चियन राष्ट्रहरुले पैसाको खोलो नै बगाइरहेका छन् ।
दरिद्र मानसिकताका मानिसहरु रातारात क्रिश्चियन बनिरहेका छन् । यतिखेर नेपालमा दिन गुनी रात चौगुनीको गतिमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बी बढिरहेका छन् । धर्म परिवर्तन गरेका नक्कली क्रिश्चियनहरुले “बढी जोगी मठ उजाड” र “नक्कली बाबाले बढी खरानी घस्छन्” जस्ता उखानलाई चरितार्थ पार्दैछन् ।
नेपालको धार्मिक वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ । धर्म रोज्ने अधिकारका नाममा धर्म परिवर्तन गर्नु धार्मिक वितण्डता, अराष्ट्रिय चिन्तन र व्यवहार हो । धर्म परिवर्तन गर्नेहरुमाथि कुनै भर, विश्वास गर्न सकिँदैन । क्रिश्चियन धर्ममा लागेका नेपालका छोराछोरीहरुले सनातन धर्मका अनुयायी आफ्ना आमाबाबुलाई रूवाइरहेका छन् । आमाबाबुको आशीर्वाद लिनुपर्ने ठाउ“मा श्राप स्वीकारिरहेका छन् । आमाबाबुको मृत्युपश्चात् सनातन हिन्दूधर्म, बौद्ध धर्मबमोजिम गर्नुपर्ने संस्कार गर्न छोडेर आफ्ना आमाबाबुलाई नरकमा पार्दैछन् ।
के क्रिश्चियन र मुस्लिमले मृत्युपश्चात् आफ्नो धर्म, संस्कार गर्न छाडेका छन् ? धर्म र अधर्मको प्रश्न बडो पेचिलो छ । विश्वमा धेरै धर्महरु छन् । जुन कुरा एउटा समुदायको धर्म हुन्छ, अर्को समुदायका लागि अधर्म हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै एक धर्म सम्प्रदायले गौरक्षा गरी गाईलाई आमासरह मान्दछ, अर्को धर्म समुदायले गाईको मासु खान्छ ।
विश्व ब्रह्माण्डमा ईश्वर एक छन्, स्वरुप अनेक छन् । ईश्वर र मनुष्यको प्रकृति एक छ । रक्षा गर्नु ईश्वरको ध्येय हो । सबै धर्मावलम्बीको एक सहारा ईश्वर नै हो । मनुष्यमा सृष्टिकालदेखि नै दैविक गुण र आसुरी प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको छ । हरेक वस्तुले आफ्नो जन्मसिद्ध धर्म आफ्नो साथमा राखेको हुन्छ । हरेक व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको बेग्लाबेग्लै धर्म हुन सक्दछ । राजनीतिक धर्म बेग्लाबेग्लै हुन सक्दछ ।
आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व हुन सक्दछ, तर धर्मबेगर यो विश्वमा कुनै कुरा टिक्न सक्दैन । धर्म नै नमान्नु पनि धर्म हो, तर आफ्नो धर्म मासेर अर्को धर्म परिवर्तन गर्नु अपराध र महापाप हो । विश्वको एकमात्र हिन्दूसापेक्ष राष्ट्र मासेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाललाई बनाउने षड्यन्त्रमा जो–जो लागेका थिए, उनीहरु धर्मविरोधी विधर्मीहरु हुन् । उनीहरुको मनमा सन्तुष्टि छैन, घरपरिवारमा सुख, शान्ति छैन । उनीहरुमा शक्ति र भक्ति केही छैन । उनीहरु घा“स खानको गाह्रोले नरपशु बनेका छन् । उनीहरुको कर्म र प्रतापले देशमा सकारात्मक परिवर्तन, सुख, शान्ति र समृद्धि कदापि हुन सक्दैन । बरू, एउटा पाप र अपराध ढाक्न १० वटा अपराध उनीहरुबाट हुन सक्दछ, भइरहेको पनि छ ।
नेपालका राजनीतिक शीर्ष नेता भनाउ“दाहरुले काशी जाने चितीको बाटो रोजिसकेका छन् । यी राजनीतिक पात्रहरुबाट राजनीतिक धर्म निर्वाह हुन सक्दैन । विवेकविहीन राजनीति देशका लागि खतरा हो । धर्म भनेको स्वभाव र कर्म हो । हरेक मनुष्यको, हरेक वस्तुको एकमात्र जन्मजात धर्म र गुण हुन्छ, जो उसको उत्पत्तिदेखि मृत्युपर्यन्त कायम रहन्छ । धर्म परिवर्तन गर्नेमा त्यो पाइ“दैन । ऊ अवसरवादी र उपभोक्तावादी एकमात्र पात्र बन्न सक्दछ ।